सम्भव हुन्जेल लामो समयसम्म स्वस्थ रहन - Hesperian Health Guides
सम्भव हुन्जेल लामो समयसम्म स्वस्थ रहन
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > महिलाका लागि डाक्टर नभएमा > यस भागमा 17: एचआइभी र एड्स > सम्भव हुन्जेल लामो समयसम्म स्वस्थ रहन
महिलाका लागि डाक्टर नभएमा
यस भागमा 17: एचआइभी र एड्स
एच.आई.भी. र एड्स भनेका के हुन्?
किन महिलाहरूका लागि एच.आई.भी.र एड्स छुट्टैखाले समस्या हो ?
एचआइभीको प्रसार रोक्ने तरिका
एचआईभी संक्रमित भएका व्यक्तिहरूले सकारात्मक ढंगबाट कसरी जिउने ?
गर्भावस्था, प्रसूतिकाल तथा स्तनपान
एचआइभी वा एड्स भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह
सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू
मृत्युको नजिक पुगेका बिरामीको हेरचाह
परिवर्तनका लागि गर्न सकिने कामहरू
एड्स भइसकेपछि शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य संक्रमण तथा समस्याहरूसँग लड्न सामर्थ हुँदैन । प्रत्येक चोटि बिरामी हुँदा रोग प्रतिरक्षा प्रणाली झन्–झन् कमजोर हुँदै जान्छ र अर्को पटकको संक्रमणमा त्यो लड्न झन् असमर्थ बन्दै जान्छ । उपचार नगरिएमा, यो प्रक्रिया त्यस मानिसको शरीर जीर्ण भएर जीवित रहुन्जेलसम्म निरन्तर चलिरहन्छ ।
संक्रमणहरू र बिरामी हुन नदिने उत्तम उपाय भनेको रोगप्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर हुन नदिनु हो । कुनैपनि संक्रमण फैलिरहन र झन् खराब हुन नदिन त्यसको उपचार गर्नु ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यसो गर्दा एड्स भएको व्यक्ति लामो समयसम्म स्वस्थ रहन सक्छ ।
संक्रमणहरूको रोकथाम गर्ने औषधिहरूको प्रयोग
एचआभी भएका व्यक्तिहरूका लागि ‘को–ट्रिमोक्साजोल’ नाम गरेको प्रति जैविकी औषधि नियमित रूपमा लिनाले केही प्रकारका निमोनिया र पखाला र अन्य प्रकारका संक्रमणहरुको रोकथाम गर्छ । यदि तौल घट्न थालेमा, ओठ वरपर घाउ उछ््रेमा वा फुटेमा, चिलाउने विमिराहरु उछ्रेमा, मुखमा घाउ भएमा, वा वारम्बार जाडो लागेमा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘को–ट्रिमोक्साजोल’ ९६० मि.ग्रा. (८० मिग्रा ट्रिमेथोप्रिम र ४०० मिगा्र सल्फामेथोक्साजोलको बनोट भएको दुई चक्की) दिनहुँ खाने अथवा हप्ताको दुईपटकले दुई चक्की खाने । यो चक्की खाँदा प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा ! ‘को–ट्रिमोक्साजोल’ एड्स भएका व्यक्तिहरूलाई एलर्जी हुनु सामान्य हो । छालामा नया“ डाबरहरू आएमा वा अन्य औषधिहरूका एलर्जीका लक्षणहरू देखिएमा यसको प्रयोग तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।
प्रतिजैविकी लिइरहने महिलाहरूका योनीमा प्रायगरी ढुसी (यिस्ट) कोसमस्या बढी हुनेगर्दछ । दही तथा दूधबाट बनेका अमिला पदार्थहरू खानालेवा दही तथा चुक मिसाइएको पानी एउटा आरीमा हालेर बस्ने गर्नाले पनि यसलाई राम्रो गर्नसक्छ ।
केही मुलुकहरुमा, एचआइभी भएका व्यक्तिहरुलाई क्षयरोगको रोकथाम गर्न औषधि लिन सल्लाह दिने गरिएको पाईन्छ ।
एचआइभी संक्रमणले मानिसको मनमस्तिष्कमा गम्भीर तनाव ल्याउँदछ । प्रायगरी एचआइभी भएका व्यक्तिले कहिले एकदम डराएको तथा तनावमा (चिन्ता) रहेको वा दुखित भएको अथवा बिल्कुलै खिन्न भएको अनुभव गर्दछ । चिन्ता र खिन्नताले पनि शरीरलाई कमजोर बनाउँछ र व्यक्तिलाई बढी सिकिस्त भएको जस्तै गराउँछ । स्वस्थ रहन र बिरामी नहुनका लागि मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहनु आवश्यक छ । एचआइभी भएका व्यक्तिले स्वास्थ्यकर्मीलाई आप्mनो समस्या शारीरिक अथवा चिन्ता वा मानसिक विरक्ति कुन कारणले भएको हो छुटयाई भन्नुपर्छ । समस्याको कारण थाहा भएपछि उपचार गर्नपनि सजिलो हुन्छ । चिन्ता वा मानसिक विरक्तिबाट उठेका भावनाहरु माथि विजय पाउन सकिन्छ । यसका लागि परामशदातार्को सल्लाह लिनुपर्छ वा सहयोगी समूहमा संलग्न हुनुपर्छ ।
यस पृष्ठलाई अद्यावधिक गरिएकोः २५ जुन २०२०
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=Where_Women_Have_No_Doctor:सम्भव_हुन्जेल_लामो_समयसम्म_स्वस्थ_रहन&oldid=318" बाट निकालिएको
अरू भाषाहरूमा Filipino English Español Français